Iwu 7 maka iso onye isi gị na -emekọrịta ihe na mpụga ọrụ - Omenala
Iwu 7 maka iso onye isi gị na -emekọrịta ihe na mpụga ọrụ
Ya mere, onye isi gị rịọrọ gị ka ị bụrụ platonic gbakwunyere ya na mmemme mgbe ọrụ gachara-ma ọ bụ ikekwe mgbago elu gị kpọrọ gị ka gị na ya kụọ klaasị. Mkpakọrịta na onye isi na mpụga mgbidi ụlọ ọrụ gị nwere ike na -atụ ụjọ nke ukwuu - wee hapụ gị ka ị na -eche ka esi eme ya.
'I nwere ike iche ụzọ isi nweta nkwalite bụ ịrụsi ọrụ ike wee nweta nnukwu nsonaazụ, mana nke ahụ ga -enweta gị ọkara ụzọ,' Jill Jacinto , ọkachamara ọrụ puku afọ na onye ntụzi ọrụ nkwukọrịta maka ỌRỤ . 'Ụzọ kacha mma ị ga -esi bulie n'ọkwá bụ ka gị na onye isi gị nwee ezi mmekọrịta.'
Mana gị na onye isi gị ịbụ enyi-enyi nwere ike nwee ọghọm ya, otu n'ime ha na-agagharị n'etiti eriri dị n'etiti onye njikwa na enyi. N'èzí ọrụ, 'onye isi gị nwere ike ịkọrọ gị ozi nkeonwe ma ọ bụ jụọ gị ndụmọdụ gbasara ihe,' ka ọ na -ekwu Aha ya bụ Stacia Pierce , onye nkuzi ndụ mmeri. 'Ma gị onwe gị dịka onye ọrụ ga -amatarịrị na ịnweghị ọchịchị n'efu ikwu uche gị n'ihe niile - ọkachasị isiokwu metụtara ọrụ.'
Soro iwu ndị a, agbanyeghị, ị ga -amụta ngwa ngwa ịga ije n'ahịrị dịka onye mmeri.
Iwu 1: A getụla mmanya. Ị nwere ike iche na n'ihi na onye isi gị kpọrọ gị ka ị bịa na -atọ ụtọ mmanya na -akparaghị ókè na nke a bụ ohere gị iji nweta ndụmọdụ na kaadị ụlọ ọrụ. Ọ bụghị ngwa ngwa. Jacinto na-atụ aro ịtọ oke mmanya ihe ọ twoụ twoụ abụọ-ma ọ bụ ihe na-erughị ya, maka ndị na-anabataghị mmanya na-aba n'anya-ma a bịa na nzukọ metụtara ọrụ. Ọ sịrị, 'nwee anụrị, mana lelee oriri gị. Na -erikwa nri mgbe niile tupu mmemme mmemme. Obere obere canapes na mmanya anaghị agwakọta nke ọma.
Iwu 2: Cheta na onye isi gị bụ nke gị onye isi . Ị na -akpa agwa dị iche -anyị chere -na gburugburu nne gị karịa ka ị na -eme ezigbo enyi gị. Otu ụkpụrụ ahụ na-emetụtakwa mgbe gị na onye isi gị ga-anọkọ. Pierce kwuru, 'Mgbe ị na -amata onye gị na ya nọ, o yikarịghị ka ị ga -ewe iwe na mkparịta ụka gị ma ọ bụ omume gị. 'Cheta naanị ka ị bụrụ enyi, mana emesola ha ihe dịka ị ga -eme BFF gị.'
Iwu 3: Na -eme mgbe niile dị ka ị nọ na elekere. N'ezie, ị pịrị aka elekere oge ilu gị. Mana ọ bụrụ na ị na-aga mmemme ọrụ-ma ọ bụ ọbụna nri abalị nkeonwe n'ụlọ gị dị elu-ị rụchaghị ọrụ, Jacinto kwuru. 'Cheta na ọ bụrụgodi na ịnọghị n'ọfịs, ị ka nọ na elekere,' ka ọ na -ekwu. 'Mee ọkachamara.'
Iwu 4: Gosi ụdị mmadụ na mmasị gị. A bịa n'ihe ị nwere ike ikwu maka ya, ịkwesighi ịrapagidesi ike n'ọganihu i mere na akụkọ ọhụrụ gị. Pierce na -adụ ọdụ, 'gbasaa mkparịta ụka gị karịa ebe ọrụ. 'Hapụ ọrụ n'ụlọ ọrụ - nke a bụ oge gị iji gosi na ị nwere ndụ na -atọ ụtọ na -atọ ụtọ na mpụga ọfịs.' Isiokwu abụọ ị ga -ezere, bụ okpukpe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Pierce kwuru, sị: 'Ọ bụrụgodi na elu ndị a bilitere, nọrọ na nche ma ghara itinye aka na mmụọ. 'Nwee mkparịta ụka' obi ụtọ 'kama.'
Iwu 5: Ekwula onye isi gị okwu ọjọọ gbasara ndị ọrụ ibe gị. Ijikọ ọnụ maka omume na-asọ oyi nke onye cubemate gị nke iri azụ azụ tuna na tebụl ya nwere ike ijikọ gị na onye isi ọhụrụ gị BFF-ma ọ bụ ọ nwere ike zitere ya ozi siri ike na ị bụghị onye otu egwuregwu. Jacinto na -ekwu, 'Iguzosi ike n'ihe na ntụkwasị obi bụ àgwà ndị isi na -achọ. 'Ọzọkwa, ị maghị ụdị mmekọrịta ha na ndị a nwere.'
Iwu 6: Kpachara anya na ụkpụrụ tebụl gị. Ị ma na ị gaghị etinye ikpere gị n'elu tebụl n'oge nri abalị mara mma. Mana ị kwenyesiri ike na nke ndụdụ ị ga -ebu ụzọ jide? A bịa n'ihe omume dị mkpa metụtara ọrụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkpa agwa na tebụl gị-ka ị ghara imenye onye isi gị ihere, ka Pierce na-ekwu. 'Ọ bụrụ na ị maghị ihe ị ga -eme, gee ndị ọzọ nọ gị nso ntị ka esi eme ihe na tebụl nri abalị,' ka ọ na -adụ ọdụ.
Iwu nke 7: Emebigala ya ókè. Ọbụlagodi na ị nwere otu mmasị n'ịmepụta pizzas gourmet nke gị na ịhụ Ryan Reynolds n'anya nke ọma, onye isi gị enweghị ike ịbụ ezigbo ezigbo enyi gị. Jacinto kwuru, 'Onye a ekwesịghị ịbụ BFF gị. 'Ha bụ ndị mbụ na onye isi gị. Debe ókè. '
ndepụta nke ihe nkiri afọ 2016 na -abịa
Uwe nwere n'elu akpụkpọ ụkwụ
egwuregwu efe ara maka obere na na